Nifandona ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka, ka tonga hatrany amin’ny fitifirana izay namoizana ain’olona, raha ny fampitam-baovao vonjimaika voaray avy any an-toerana. 3 no efa tena azo antoka fa maty, araka ny fampitam-baovaon’ny olon-tsotra avy any an-toerana, saingy nisy ihany koa ny loharanom-baovao hafa nilaza fa efa tafakatra 5 izany. Andrasana izay tena akony sy ny fampitam-baovao ofisialy mikasika ity toe-draharaha ity, fa raha ny fanazavana vonjimaika dia niainga tamin’ny fifamaliana teo amin’ny mpivarotra trondro sy ny zandary ny disadisa. Nisy ny fifamaliana nandritra ny fitakiana vola tamina mpivarotra trondro. Tsy nahazaka ilay zandary ka nodarohany tamin’ny vodi-basy ilay mpivarotra sady nohitsakitsahiny, ka torana, hoy hatrany ny fanazavana vonjimaika. Nentina teny amin’ny hopitaly, saingy tsy tana ny ainy noho ny dona nahazo azy. Nanomboka teo, dia nihamafy ny fifandonana satria tezitra ny olona, ka izay no nahatonga ny fitifirana, raha ny tatitra azo. Izay no tatitra sy fanazavana vonjimaika, fa andrasana kosa ny tena ambaran’ny manam-pahefana sy ny tompon’andraikitra eo anatrehan’ny zava-misy. Na inona na inona antony, dia tsy eken’ny lalàna ary mifanohitra amin’ny zon’olombelona ny herisetra sy ny fifamonoana, ary ny fandatsahana ain’olona, izay tokony hosorohana foana. Tamin’ny herinandro ambony no nisian’ilay raharaha zandary nitifitra olona sy nahafaty olona tao anaty “bar”, dia io fa miseho indray ihany koa ny gidragidran’ny zandary sy ny fokonolona tany Soavinandriana Itasy. Tsy natao hanamelohana na hankahalana, fa toa miha mitombo ny heretran’ny mpitandro ny filaminana. Manaporo izany ny antontan’isa toy ny avy amin’ny zandarimaria fa mananika ny 80 no misazy. Mifameno ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana fa tsy sanatria mpifanandrina, ka hifampiandry an-kendritohana.